Madaxweynaha Soomaaliya oo ka tacsiyeeyay geerida Ugaas Xasan | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Madaxweynaha Soomaaliya oo ka tacsiyeeyay geerida Ugaas Xasan
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada Gobolka Hiiraan ee uu Xalay ka baxay Alle ha u naxariistee Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo ka mid ahaa dubaabka dhaqanka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa xusay in Ugaasku uu ahaa hurmuud dhaqan oo lagu soo hiran jiray, door muuqdana ka soo qaatay dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed, adkeynta wadajirka iyo dadaalladii dib u dhiska dowladnimada Soomaaliyeed.
Mas’uuliyiin kala duwan, siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada Soomaaliyeed ayaa tacsiyeeyay geerida ku timid Ugaas Xasan Ugaas Khaliif, waxaana baraha Bulshada hareeysay tacsi loo dirayo qoyska Ugaaska uu ka baxay,shacabka Gobolka hiiraan iyo Guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
Allaha u naxariistee Ugaas Xassan ayaa ka mid ahaa dhaqanka Soomaaliyeed kuwooda ugu facaweyn, uguna saameynta badan, waxaana aad loogu xasuustaa doorkii uu ku lahaa yagleelidda maamul goboleedka Hirshabeelle.
Ugaas Xasan ayaa maamuuska Ugaasnimo loo caano shubay bishii July sannadki 2016-ki, kaddib geeridii walaalkii, Ugaas Abdirahman Ugaas Khaliif.
Next articleDHAGEYSO:Dhakhaatiirta daawooyinka ka bixiyo isbitaallada oo shaqo joojin soo afjaray